Ogaden News Agency (ONA) – Flim:The ESSENCE OF TERROR oo Jaamacada Copenhagen Lagu Soobandhigay
Flim:The ESSENCE OF TERROR oo Jaamacada Copenhagen Lagu Soobandhigay
Posted by ONA Admin	/ May 29, 2014
Jaamacada Copenhagen qaybteeda Arimaha Africa ayaa shalay lagu soo bandhigay Filinkii uu soo diyaariyay Mudane Cabdilahi Xuseen ee kusaabsanaa gumaadka iyo dhibaatada uu gumaysiga Itoobiya ku hayo shacabka Ogadenya.
Jaamacada Copenhagen University qaybteeda arimaha Afrika (African Studies Department) ayaa soo qaban qaabisay isla markaana lagu soo bandhigay shalay filinkii ciiwaankiisu ahaa ESSENCE OF TERROR. Filinkan oo uu soodiyaariyay isla markaana uu soo bandhigay Mudane C/lahi Xuseen ayaa noqday filin aad umurugo badan oo muujinaya xasuuqa ba,an ee arxan darrada ah ee uu Gumaysiga Wayaanuhu kuhayo shacabka Somalida Ogadenya.
Kadib markii dadwaynihii madashada iskuguyimid ay daawadeen filinkii laga soodiyaariyay Ogadenya ayaa waxaa mar kaliya isbadalay dareenka iyo shucuurta kaqayb galeyaasha madasha iskugu yimid oo ahaa ardadii Jaamacada Copenhagen. Filinkan oo muujinayay tacadiyada iyo xadgudubka kadhanka ah xuquuqda bani,aadamka ee laguhayo bulshada rayadka ah ee kudhaqan wadanka Ogadenya ayaa noqday mid argagax iyo murugo badan kureebay daawadayaashii filinka.
Waxaa su,aalo kusaabsan filinkan laga waydiiyay Mudane C/lahi Xuseen oo si wanaagsan ooga wada jawaabay dhamaan su,aalihii ay ardada iyo dadweynuhu weydiiyeen. Mudane Cabdullahi yaa oogu bishaareeyay dadwaynihii fadhiyay hoolkii filinka lagu daawaday inuu filinkaas oo hada kahor fagaareyaal badan oo caalami ah lagu soobandhigay in ay shirkad caalami ah qaadatay luuqado badana lagu turjumayo caalamkana lagawada daawan doono haduu eebuhu yiraahdo. Waxaan shaki kujirin in qofkii filinkan daawada oo damiirkiisu shaqaynayo ama dareen banii,aadam ilaahay siiyay inuusan jiif iyo joog toona qabanaynin.
Tan iyo intii filinka lasoosaaray waxaa soo badanaya oo maalinba maalinta kadambaysa isa soo taraya dalabaadka iyo codsiyo isdaba joog ah oo filinkan lagu dalbanayo.
Ardayda Jaamacada Copenhagen ayaa qiray inay Ogadenya iyo Itoobiyaba ka barteen wax badan oo aysan awal hore ka aqoonin kana faaiideysteen filinkan ay daawadeen si daqiiq ahna ula socon doonaan xaalada guud ee shacabka Somalida Ogadenya siiba dhibaatooyinka joogtada ah ee kajirta Ogadenya.